Dowladda Soomaaliya Oo Jawaab Jilicsan Siisay Dawlada Kenya – Ilays News
Dowladda Soomaaliya Oo Jawaab Jilicsan Siisay Dawlada Kenya
“Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (“dowladda Soomaaliya”), iyada oo qaddarinaysa Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Jamhuuriyadda Kenya (“Dowladda Kenya”), waxay aad uga walaacsan tahay go’aankii ay dhawaan qaadatay Dowladda Kenya ee lagu xadaynayey dal ku galka xubnaha xukuumadda iyo Baarlamaanka Soomaaliya,” ayaa lagu billaabay qoraalka warkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
Ciid Baddel Maxamad, oo ah diblumaasi hore, ayaa sheegay in jawaabta dowladda Soomaaliya lagu tilmaami karo inay tahay mid “gacan ku-gabbad ah”.
Waxaa uu sheegay in Kenya ay u muuqato inay cad-cadahay, halka Soomaaliya ay ka muuqato in “aysan aqbalin in Kenya ay go’aansatay inay ka baxdo heshiisyadii ay galeen labada dhinac”.
Ciid Baddel ayaa sheegay in sababta ay noqon karto “dano shakhsi ah” oo madaxda qaarkeed ay ka leeyihiin dalka Kenya, taas oo laga yaabo inay Kenya ku qaadday inay dareento inay madaxdu “faro ka hayso”.
Dowladda Madaxweyne Farmajo ayaa horey looga bartay go’aanno adag oo deg deg ah
Warka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa lagu muujiyay oo keliya ah walaaca ay ka qabaan go’aanka Kenya.
“Dowladda Soomaaliya waxay si gaar ah uga walaacsantahay in xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhowaan u safray magaalada Nairobi, kuwaas oo ay ku jireen wasiirro iyo xildhibaanno, ay xinnibaad ku sameeyeen saraakiil ka tirsan hay’adda socdaalka Kenya, Baasaboorradoodii laga qaaday, ka dibna dib loogu soo celiyay Muqdisho,” ayaa lagu yidhi qoraalka.
Si kastaba, qeyb ka mid ah warsaxaafadeedka oo dowladda Soomaaliya ay ugu muuqatay in ay Kenya digniin siineyso ayaa lagu xusay: “Tallaabooyinkaasi waxay carqalad ku yihiin xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidaas darteed, dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay xeeriso carqaladaha ay keeni karaan tallaabooyinkaasi oo ay ilaaliso xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labadeenna dal, isla-markaana tix geliso dabciga dublamaasiyaddeed iyo ixtiraamka labada waddan kala mudan yihiin”.
“Dowladda Soomaaliya waxaa dhankeeda ka go’an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ee ay la leedahay dowladda Kenya, waxayna sii wadi doontaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda Kenya ee Soomaaliya imanaya”, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.